Wuhan Coronavirus virus – စာမကျြနှာ7– Healthy Life Journal
COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အသွားအလာ ကန့်သတ်ခြင်း ပြုလုပ်သည့်နေရာများတွင် အရေးတကြီးလိုအပ်သော တကိုယ်ရေအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို ကုလသမဂ္ဂမှ ပံ့ပိုးမည်
အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း(Quarantine) ပြုလုပ်သည့်နေရာများတွင် အရေးတကြီးလိုအပ်သော တကိုယ်ရေအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ အိပ်ယာခင်း၊ မွေ့ရာ၊ စောင်၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ခြင်ထောင်များ အစရှိသည့် အခြေခံအသုံးအဆောင် ၅၀ဝ၀ ကျော်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP) ကလည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကာကွယ်ရေးအတွက် ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ရမလဲ . . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကာကွယ်ရေးအတွက် ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်သင့်ပါသလဲ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ဆိုတော့ သိပ်စိုးရိမ်မိပါတယ်။ Hnin(FB) A. COVID-19 က မဖြစ်ဖို့ရာ ကာကွယ်ဖို့ အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့များ ကူးစက်ခဲ့ရင်...
COVID-19 ရောဂါက အေသွေးပိုင်ရှင်တွေမှာ ပိုအဖြစ်များတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်၍ . . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. အခုသတင်းတွေအရ COVID-19 ရောဂါက အိုသွေးပိုင်ရှင်တွေထက် အေသွေးပိုင်ရှင်တွေမှာ ပိုအဖြစ်များတယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြလို့ပါ။ အဲဒါက ဖြစ်နိုင်ပါသလား ဆရာ။ နောက်တစ်ချက်က ရောဂါဖြစ်နှုန်းတွေက သွေးအုပ်စုနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။ (စာဖတ်သူတစ်ဦး) A. ဆရာ့ထင်မြင်ချက်အရ...
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) အငြိမ်းစား၊ ပြည်သူလူထုအတွင်း ကူးစက်ရောဂါ ပျံ့နှံ့လာတဲ့အချိန်ကာလမှာ ရက်ကွက်လူတွေထဲမှာ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် Psychiatric Time ဂျာနယ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စိတ်မကျေမနပ်ဖြစ်နေခြင်း၊ စိုးရိမ်သောကများခြင်း၊ ရောဂါကူးစက်မှာကို ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း စတဲ့...
ပါမောက္ခဦးသိန်းမြင့် ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ မကွေးဆေးတက္ကသိုလ် ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဖြေကြားသည်။ Q. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုမှာဖြစ်နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူတွေထဲမှာ အခြေခံရောဂါရှိသူဦးရေက များတယ်ဆိုတော့ အကယ်၍ သံသယလူနာရောက်လာခဲ့ရင် ဆရာတို့ဆေးရုံမှာ ဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားပါသလဲ ဆရာ။ A. COVID...
ပါမောက္ခဦးသိန်းမြင့် (ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်) ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဖြေကြားသည်။ Q. COVID 19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်တဲ့အခါ ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့သူတွေဆိုရင် စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ် နည်းသူတွေထဲမှာ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေ ပါတယ်လို့ ပြောနေတဲ့အတွက် ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်မြင့်တက်အောင် ဘယ်လိုဂရုစိုက်...
၀ူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19)ကြောင့် ဖြစ်တတ်သည့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါဆိုသည်မှာ
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. ဘယ်လိုလူတွေက ၀ူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါသလဲ ဆရာ။ A. ၀ူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19)က အသက်ရှူလမ်းကြောင်းက ၀င်လာတဲ့အတွက် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းမှာ နေရာယူတယ်၊ ပြီးရင်ပွားတယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ကောင်တည်း ၀င်လာလို့ကတော့ ရောဂါလက္ခဏာ ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။...